uhlala uboniswa kwisamsung galaxy s8 vs lg g6
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Soloko iboniswa kwi-Samsung Galaxy S8 vs LG G6
Soloko iboniswa kwi-Samsung Galaxy S8 vs LG G6
Ke, ukusukela kulo nyaka uphelileyo, i-LG kunye ne-Samsung banikezela ngento entsha kwii-smartphones zabo eziphambili-ezihlala ziboniswa. Nokuba ifowuni yakho ilele, umboniso ubonakalisa iwijethi ehlala ikho, engakhanyisiyo kwiscreen, ikunika ulwazi olubalulekileyo, njengexesha, kunye nezaziso eziphosiweyo.
Ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ezidlulileyo, iSamsung yakhelwe kwingcinga yayo yoqobo, yongeza amanqaku amatsha, kunye nokuphucula indlela ehlala isebenza ngayo, ngelixa ii-LG azinazitshintsho zininzi. Masikhe sijonge umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini!
Iifowuni ze-Sammy kunye ne-apos; zishukumisa umboniso we-AMOLED, ngelixa izixhobo ze-LG kunye neeapos zixhotyiswe ngepaneli yeLCD. Ke, ngelixa i-Galaxy S8 inokukhanyisa kuphela iipikseli ezimbalwa ezizifunayo, kwaye ishiye yonke into icinyiwe, umboniso kwi-G6 ufuna ukukhanya kwayo kwakhona. Ke, ukwenzela ukuzisa ukusetyenziswa kwebhetri phantsi, i-LG iyafuneka edolophini phantsi kokuqaqamba kwayo.
Kwi-G6, nangona kunjalo, inkampani yongeze ukuqaqamba kokuqaqamba. Ke, ukuba ufumanisa ukuba ifowuni yakho & iiapos zihlala zibonakaliswa kunzima ukuzibona, ungayenza ngexabiso lobomi bebhetri. Nazi iiapos indlela ezibukeka ngayo iifowuni ezimbini xa kuthelekiswa, kunye nokuqaqamba kwe-G6 & apos;
< Brigness Boost Off Ukunyusa iBrigness>
Kwiifowuni zombini, unokutshintsha isitayile sewijethi onayo kumboniso osoloko uhleli. Nangona kunjalo, kukhethwe ukhetho olunomda kwi-G6-ungakhetha iwotshi yedijithali, iwotshi ye-analog, kunye notyikityo lwesiko. Yiyo & apos; yiyo.
Kwi-Samsung Galaxy S8, unokukhetha iwotshi yedijithali okanye ye-analog, iwotshi yehlabathi, ikhalenda, okanye owakho umfanekiso. Ewe unokuba nefoto oyithathe ngokusisigxina kumboniso ohlala uhleli.
Ukuyikhupha phezulu, iiwijethi ze-S8 & apos; zinokuba nemvelaphi encinci yefowuni kunye nokukhethwa kombala wesiko. Ke, ngokwembonakalo kunye nokwenza ngokwezifiso, ukhetho lukaSammy & apos ngokuqinisekileyo luyindlela, phambili.
Nanini na xa unesaziso esivelileyo-umnxeba ophosiweyo, isicatshulwa esincokolwayo, i-imeyile, nantoni na eyenye- uya kubona i icon encinci kumboniso ohlala uhleli, emele usetyenziso. Kwi-LG G6, oku kukwazisa nje - ii icon azishukumi, kufuneka uvuse ifowuni yakho kwaye ucofe isaziso ukusuka apho.
Kwi-Galaxy S8, unokwenza isenzo kwisibonisi esihlala sihleli. Ukucofa kabini iwashi / ikhalenda yewijethi iya kuveza ulawulo lweendaba, oluya kukuvumela ukuba ulawule umculo wakho wokudlala ngaphandle kokuvula ifowuni. Ukuba ucofa kabini uphawu lwe-app ethile, ifowuni iya kuqhubeka kwaye isungule usetyenziso (kuya kufuneka usebenzise isithwebuli somnwe, iris scanner, okanye iPIN, ukuba ifowuni itshixiwe, kodwa ufumana umbono ).
I-Galaxy S8 ihlala ikwiimpawu ezinokusebenziseka
Isibonisi esihlala sihleli sisenokubaluleka okuthandabuzekayo. Ngumphumo wokucoca ngokusisigxina kwibhetri yakho, enganiki xabiso kakhulu kwimbuyekezo. Ngokuqinisekileyo unokufumana ngokwaneleyo umbono olungileyo malunga nezaziso ezilindileyo onazo xa ubona ukukhanya kwemibala emininzi ye-LED (ngolusizi, oku kushiyiwe kwi-LG G6). Ngokuqinisekileyo, iyayiguqula ifowuni yakho ibe yiwotshi yetafile, kodwa iapos isebenzise amandla ngakumbi ukuvusa ifowuni yakho kube kanye emva kwexesha ukukhangela ixesha, endaweni yokuba ikhanye rhoqo.
Oko kwathethi, kwaye sicinga ukuba kukho amaxesha apho i-Soloko i-On iluncedo, thina & apos; d sithi i-Samsung yenze umsebenzi omkhulu ekuphuculeni ukusebenza kunye nokwenza ngokwezifiso inqaku kwiifowuni zalo. Ukunikezelwa kwe-LG kunye ne-apos ye-Soloko ihleli isabambekile kwangoko kwi-2016 kwaye iziva ikhutshiwe kwaye ilibalekile.
Eyona mmo imidlalo iphone
I-LG Optimus F3Q enebhodibhodi ye-QWERTY yesilayidi esiya kwi-T-Mobile
I-Samsung Galaxy Tab ye-S4 ilungele ukutyhilwa ecaleni kwebhodi yezitshixo yeNcwadi eNtsha
I-iPad igwetyelwe ukuhlala iyisixhobo sesibini (ubuncinci omnye unyaka)